Top Toban MP4 in MP3 converters Online
Oo wakhtigii hore ee ascendance internetka ee ah in la qaybiyo warbaahinta madal hoose, MP3 ahaa jidka loo tago. Waxay ahayd caddaalad ah universal, oo waxaa la ciyaari karin Windows ah, Mac ama Linux PC. Waxaa jiray kala duwan ciyaartoyda MP3 portal joogay oo kharash-ool ah oo ku bixiyeen kaydinta weyn, iyo gawaari badan oo loogu tala galay in la-dumisaan MP3 ciyaartoyda.
Dabeecadda multimedia ee file MP4 ayaa xoogaa bedelay wax. Iyada oo awoodda sii kordhaysa ee qalabka Xararad iyo mobile, oo diiradda Apple ee Lugood madal on qaab MP4 ah, waxaa hadda waa dhaqdhaqaaq ku jeeda MP4. Awoodda in ay encode video, audio iyo dar-on qaababka sida qoraalka ku file isla badbaadiyay on madaxa korkiisa, yaraynaysaa waqtiga in la soo saaro soo saarka warbaahinta weyn oo u baahan wax ka yar bandwidth iyo computer processing inuu u ciyaaro faylka. Si aad u ciyaaro file MP4 ah oo ku saabsan mid ka mid ah ciyaartoyda MP3 la qaadi karo, ama qaar ka mid ah gawaarida, faylka loo baahan yahay in diinta MP3. Kuwani waa kuwa ugu khayr qalab online diyaar u kala guurka in.
Zamzar waa ad taageerto, sidaas darteed lacag la'aan ah si user dhamaadka, iyo weli ma gelin xayeysiiska sidaas wejigaaga in aanad isticmaali kartaa software ah. Kor laab ah, waxaa jira geeddi-socodka ah saddex button deg deg ah oo aan xanuun lahayn oo qaadaya file aad MP4, oo waxaad cayimi kartaa by URL ama via Upload, oo waxay kuu ogolaanaysaa inaad sheeg qiimaha wax soo saarka. Tani waa laayeen dhab ah Zamzar - waxay bixiyaan qaabab badan oo kala duwan oo wax soo saarka, iyo iyaga oo calaamadee in, hab fudud in ay isticmaalaan waxtar leh sida, in qof kasta oo ay awoodaan in ay sameeyaan MP4 ah in ay diinta ka file MP3 waxbarasho xaddidan oo aan lahayn wax alla wixii stress waa in.
Zamzar sameeya codsan cinwaanka email isticmaala, taas oo ay email doonaa faylka la gediyay. Dadka qaarkood waxaa laga yaabaa in aan raaxo leh this. Sidoo kale, adeeg ku kooban tahay 100 MB faylasha loogu diinta kasta, iyo file a MP4 waaweyn, u baahan in falinjeeerka, markaas diinta qayb kasta oo ka bacdi. Iyada oo ay tani tahay dhammaadka wakhtiga dunidu ka, waxaa hubaal ah ku dari kartaa waqti ay ku nidaamka.
2. MP3 qalabeed
Dadka aan com oo dhammaantood waa raaxo leh fikradda qaadashada file ah iyo samaynta galay file kale, MP3 qalabeed waa xal weyn. Its interface nadiif ah oo si sahlan loo isticmaali ku badan tilmaamaha uu ka samaysan yahay macaamil ganacsi kasta oo fudud oo xanuun lacag la'aan ah. Badhanka weyn oo cas dhexe ee shaashadda ka dhigan tahay tallaabo mid ka mid ah hawlaha qaab beddelidda, mana jiraan xubno ka jeediso ama wareer on page si uu u sameeyo adag bilowga.
Qalabeed MP3 ma ogolaan kaliya files MP4 Uploaded, halkii ay ka jidaynayey user ay u sheeg URL ah. Tani waxay noqon kartaa ka biyodiiday u isticmaala qaar ka mid ah. Si kastaba ha ahaatee, waa adeeg deg deg ah oo si sahlan ay u isticmaalaan iyo soo rogay ma cad xadeynta size file. Shayga waa si dhakhso ah oo diyaar u ah in la si toos ah uploaded karaa in Soundcloud ama warbaahinta bulshada.
ConvertFiles waa adeeg aad u gaarka ah ee loogu talagalay in ay ka in ay oggolaadaan in aad si loogu badalo nooc kasta oo file in nooc kasta oo kale oo file. Waa madal web-ku salaysan la interface ah fududeeyey ah. Inkasta oo ay u muuqato fudud quruxsan, waxaa jira wax badan oo aad daboosho. Users cayimi kartaa meesha file waa in ay doonayaan badaley - adigoo URL ama ay Upload. By la tilmaamayo qaabab talooyin iyo qaabab wax soo saarka, nidaamka la sheegay waxa ay diinta ka geeddi-socodka si uu ugu tartamo. The user sidoo kale codsan kartaa xiriir download faylka la gediyay loo soo diro cinwaanka email ay. Tani waa fursad wanaagsan marka ay jiraan laga badalay mid aad u ballaaran ka dhacaya.
Guud ahaan, tani waa qalab weyn oo diinta u qaadan file MP4 si aad u MP3, oo waxay bixisaa tan oo muuqaalada kale oo dheeraad ah iyo sidoo kale.
Developer: Beddelaan Files
Mid ka mid ah dhufto ee diinta audio in qiyaastii muddo ah, website-ka Media.IO u ogolaanaya in ay diinta ka MP4 file MP3 lacag la'aan ah, iyada oo in ka badan barnaamijyada xulashada intooda badan. Ka dib markii la tilmaamayo file MP4 ah (sidoo kale via geliyo ama URL) user ka dhigay karaa koobin sida tayada (ba'an, High, Normal ama Hoose) kaas oo go'aamin doona size file iyo qaababka kale ee file. Tani waxay noqon kartaa faa'iido weyn marka la qaadanayo file MP4 ah in qaab MP3.
Developer: Wondershare (http://www.wondershare.com )
Noo keenay nin Online badalo, ayaa in ka badan horumarsan oo adag Online-Convert.com guuri kartaa file MP4 si aad u qaab MP3, oo si deg deg ah si fudud lagu samayn karaa! Sida boosteejo ah oo internetka ku salaysan, barnaamijka bixisaa awood u leeyahay inuu qaato ku dhawaad ​​kasta oo file oo u celi galay ku dhawaad ​​nooca file kasta. Dadka doonaya in ay badalo MP4 in MP3, awoodda waa xaq waxaa bogga hore. Tayada sameecadda ah ee hawlaha qaab beddelidda iyo xawaaraha diinta ka bixiyaan alaabta yihiin, oo daacad ah, off gooldhalinta ah. Dib u eegida waa weyn, iyo qiimaha sidoo kale waa mid aad u wanaagsan - waa lacag la'aan ah si loogu badalo MP4 in MP3!
Developer: Online badalo
Iyada oo ay tahay wax yar gaabis ka badan goobaha qaar ka mid ah, madal Convert2Mp3.net uu leeyahay qaar ka mid ah muuqaalada qabow oo aan caadi ahayn. Waayo, mid wax, waa laba af ku hadla, oo ka baxsan adeegyada turjumaada goobta caadiga ah. Waxaa dhab ahaan ku suntan ee Holland iyo Ingiriiska. Wixii kale, waxa uu ku wajahan xagga diinta ee videos marti goobaha sida Youtube iyo Clipfish. Gelida URL ee video MP4 ah, ka dibna la dooranayo qaabka aad rabto in aad wax soo saarka si ay u, oo u ogolaanaya diinta si ay u bilaabaan. Haddii aadan haysan video gaar ah ku hay, laakiin garan aad raadineyso weeyna wax by Depeche Mode, waxaad ka raadin kartaa videos in ciyaari artist in, oo iyaga loogu badalo in ay MP3 in hal talaabo. Under button goobaha aad dooran kartaa in aad ka mid tahay daboolka la file MP3 ka dib markii diinta, dhigay fursadaha tagging, iyo dhaqaajiso ama barkinta gaadhsiin marka diinta ay tahay mid dhamaystiran.
Kani waa barnaamij muuqaalada-buuxa ah ah oo kaliya madal online. Oo keliya doorasho "premium" Adeeggu waa mid dhakhso diinta iyo download xawaare, taas oo goobta ma dalban aad ka fiirsan - waxay halkaas ku soo bixiyeen sidii doorasho ah.
Developer: badalo si MP3
7. Cloud badalo
Badalo Cloud waa aalad diinta cusub iyo hami web-ku salaysan ka Lunaweb. Goobta waa mid aad u xirfad leh oo si fiican loo qorsheeyay, iyo dadka isticmaala waxay bixisaa macluumaad ku filan in aad dareemtid raaxo iyo geeddi-socodka ah ee diinta MP4 in MP3 bilowdo, oo aan aad u farsamo ama handadaad. Waxaa jira wax weyn oo qoto dheer in madal, sida ay taageerto ka badan 208 beddelaad kala duwan nooca file. Wixii ka soo baxay web ku salaysan, waa mid gaar ah ee taageeraya diinta Dufcaddii ee MP4 in MP3 files, iyo waxa ay sidoo kale bixisaa API ah extensible si ay u taageeraan geliyaan madal dhex codsiyada kartoo. Iyada oo aan xitaa la qorayo username ah, Cloud iyo Beeralay kor u ogolaanaya in ay 10 beddelaad ah maalin kasta ku koobnayn 100 MB, iyo kuwa doonaya in ay buuxiyaan foomka diiwaangelinta oo gaaban, ilaa 25 beddelaad ku koobnayn 1 gig yihiin. Waxaa sidoo kale jira baakadaha prepaid iyo xidhid bixiya diinta waqtiga on servers Cloud badalo ee awoodda badan.
Price: Free inay iska bixiyaan Time
8. Online Converter Audio
Online Audio Converter waa mid ka mid ah MP4 ugu isticmaalay si ballaaran si ay u MP3 converters online. Its hab ad ku salaysan ma aha in wejigaaga, iyo interface ay tahay mid fudud in la isticmaalo. Fursada in la furo files il ka kombiyuutarka, Google Drive, WordPress, SkyDrive ama URL kasta waa timesaver ah, iyo halka users ugu faraxsanaan doonaa iyadoo goobaha tayada default, waxaa jira fursad u sheeg-beegyada uu wax soo saarka. Under Settings Advanced, dadka isticmaala farsamada ku faraxsan in ay arkaan in ay jiraan xitaa awood u leh inay isku dayaan in ay ka saarto codkii inta lagu jiro diinta doonaa. Tani waa muujinta gaar sare ee adeegga internetka ku salaysan.
Mid ka mid ah barnaamijyada diinta internetka ku salaysan isku dayay oo waa run, Online Video Converter ogolaanayaa qof (xitaa inuusan total) sheeg file MP4 ah si loogu badalo in MP3. Waxa ay taageertaa jiita iyo hoos u dhac, iyo dhirta in ay soo gudbiyaan Upload laakiin ma taageeri tilmaanta URL. Waa cross-browser awood, waxa ikhtiyaar ah, waayo, dadka isticmaala mobile samaynta, oo u qabata beddelaad si deg deg ah oo nadiif ah. Waxaa jira diiwaan ma loo baahan yahay, iyo halka set feature waa quruxsan xadidan, waxa aanu si sax ah waxa uu sheegaayo ee sanduuqa.
10. MP4 in MP3 - Free Online Converter
Sida an diinta madal online, MP4 in ay MP3 - Free Online Converter by Cool Utils Development ayaa waxoogaa yar oo ah wax kasta. Waxay habka bilaabataa Upload file. Markaas user waa inay awoodaan in ay doortaan nooca caga faylka, oo waxaa inta badan noocyada muhiimka ah waxaa laga heli karaa. Waxaa hoos Options in software-ka, kaas oo la web gebi ahaanba ku salaysan, ay wado shaqadeeda ugu fiican. Sicirka muunad, channelization iyo bitrate jira oo dhan controllable by user dhamaadka, iyo heerka ay tani faahfaahin ka dhigi kartaa farqiga u dhexeeya ah file gediyay OK iyo tayo aad u fiican oo ku badaley file. Hawlaha qaab beddelidda waa si cadaalad ah si degdeg ah, iyo fursad u download sidoo kale si cadaalad ah si degdeg ah. Qeybta hoose ee bogga leedahay Hanuuniye anfacaya in noocyada file kala duwan, kuwaas oo ku caawin kara in qof kale oo aan ka sare leh farsamo, laakiin uu doonayo in uu hubiyo in ay qaado madal saxda ah.
Developer: Qabooji Horumarinta Utils
Sida loo Play MP4 in VLC
Sida loo Beddelaan 2D in MP4 3D fudayd
> Resource > MP4 > Top Toban MP4 in MP3 converters Online